Fanentanana avy amin’ny filoha lefitry ny fiangonana noho ny Fandraisan-tànana ny mpitandrina – FJKM Ambavahadimitafo Fanentanana avy amin’ny filoha lefitry ny fiangonana noho ny Fandraisan-tànana ny mpitandrina |
Tamin’ny 13 mai 2012 dia tonga marobe isika naneho hevitra ary nanaiky fa horaisin-tànana eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo ny mpitandrina Rakotoniera Christian Eric.
Tonga ary izao ny fotoana hanatanterahana izany veli-rano hifanaovan’ny fiangonana sy ny mpitandrina izany.
Zaraina ho fotoana indroa miantoana izany fandraisan-tànana ny Mpitandrina Rakotoniera izay ka hiarahana amin’ny Birao Foibe sy Synodam-paritany Atsinanan izany ny 23 novambra 2013. Izy ireo moa dia ao anatin’ny rafitry ny FJKM, fa isika kosa no fiangonana hahatongavany eto ary hanatrika izany veli-rano izany. Koa manentana antsika mba handamina ny fotoanantsika, na dia fantatra tokoa fa tsy mety tapitra ny adidy any ivelany, ka ho tonga hanatrika izany fotoan-dehibe izany satria lehibe amin’ny asan’Andriamanitra izany.
Ny antony hanatanterahana fotoana manokana ho an’ny Birao Foibe sy ny Synodam-paritany moa dia satria maro amin’izy ireo no tsy afaka amin’ny andro alahady noho ny andraikitr’izy ireo, ka izany indrindra no hanokanana fotoana manokana toy izao.
Ny 01 desambra 2013 kosa dia tsy ho vitan’ny koranam-pianakaviana akory fa hisy ny fiombonam-bavaka ary fanehoantsika eo imason’ny fiangonana fa ao anatin’ny fifankatiavana sy ny fifandeferana no hanehoantsika izany fandraisan-tànana izany.
Ampatsiahivina fa isika loholona sy diakona, izay mpiara-miasa akaiky amin’ny Tompo dia hiara-hisakafo ao amin’ny akany Ralibera Daniel sy ny ray amandreny mpitandrina sy ireo vahiny samihafa nasaina.
Ny tonona sy ny tolotra rehetra nataontsika moa dia aseho eo an-tokontanim-piangonana mba hisian’ny mangarahara hatrany amin’ny fikarakarana toy izao.
Teny faneva : Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny oniny rehetra mandrakariva amin’ny zavatra rehetra, ka hitombo amin’ny asa rehetra (IIKor 9, 8)